Kani waa Galaxy J1 Pop | Androidsis
Samsung waligeed kama daasho wershadaha wax soo saarka wax kastoo ay kala duwan yihiin. Shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koofureed waxay dooneysaa inay daboosho suuqa oo dhan waana taas sababta aan u aragno boosteejooyin heer sare ah, heer dhexe ah iyo kuwo dhammaad leh dhammaantood wax kastoo aasaaska aan booqano ah. Si sax ah xadka ugu dambeeya, heerka hoose, Samsung waxay diyaarisay terminal cusub, the Galaxy J1 Pop.
Waad ku mahadsan tahay mar kale daadinta waxaan ogaan karnaa qeexitaannada mustaqbalka-dhamaadka mustaqbalka ee Koonfurta Kuuriya ay kici doonaan. Sida caadada u ah aaladaha kala duwan, Galaxy-ga cusub waxaa lagu soo saari doonaa qalab tayadiisu hooseyso, sida balaastigga. Waxyaabaha noocan ahi waxay ka dhigayaan aaladda qiimaha ka hooseeya oo aad ugu macquulsan adeegsadaha.
Calaamadda Galaxy-ka ayaa faa iidooyin badan siisay Kuuriyaanka markaa waa macquul inay sii wadaan sharad ay ku sii daayaan aaladaha ku hoos jira astaantaas. Terminal-ka cusub ee hoos imanaya astaanta Galaxy ayaa lagu xantaa inuu leeyahay a 4,3 ″ shaashad inji ah oo leh qaraar ka sarreeya kan walaalkiis yar, ayaa Galaxy J1. Gudaha waxaan ka heli karnaa a processor laba-geesood ah xawaare saacad ah 1.2 Ghz oo ay la socoto 512 MB ama 1 GB oo xasuusta RAM ah. Marka la eego keydkeeda waxay noqon laheyd 4 GB lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo booska microSD, kamarad gadaal ah oo 5 MP leh LED Flash iyo a 1850 mAh baytariga.
Waxyaabaha kale ee aan muhiimka ahayn waxaa ka mid ah Samsung Galaxy J1 Pop wuxuu ku socon doonaa hoosta Android 4.4.4 Kit Kat wax hadal ah kama qabin inay cusbooneysiin doonto Android 5.0 Lollipop. Waxay yeelan doontaa cabir iswaafajsan iyo culeys qiyaastiisu dhan tahay 120 garaam qiimihiisuna wuxuu ka hooseyn karaa € 120 isbeddelka. Waqtigan xaadirka ah Samsung ma aysan xaqiijin qeexitaanada ama helitaanka aaladda, in kasta oo wararka xanta ah ee ku saabsan Terminalkan ay soo jeedinayaan in dalal ay ka mid yihiin India, Russia iyo Brazil ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ku raaxeysanaya qalabkan hooseeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Kani waa Samsung Galaxy J1 Pop